Ahoana ny fampiasana SuperOneClick | Androidsis
Ahoana ny fomba hanonganana ny terminal Android anao amin'ny SuperOneClick
Ao amin'ny lesona manaraka dia hasehoko anao, miaraka amin'ny fanampiana sarobidy avy amin'ny SuperOneClick, fandaharana ho an'ny Windows y manan-kery ho an'ny terminal Android be dia beAhoana ny fomba hamehezana amin'ny fomba tena tsotra sy amin'ny tsindry vitsivitsy ny terminal misy anao amin'ny rafitra fiasa Android.
Maimaimpoana tanteraka ity programa ity, satria programa open source na antsoina koa izy io Open Source, izay ahafahantsika mamongatra terminal Android tsy misy farany.
Root dia midika hoe manana fidirana amin'ireo rakitra rehetra ao amin'ny fitaovantsika, ary afaka manao sy manafoana araka izay azonay atao ao anatin'ny rafitry ny rakitra ao anatiny ao amin'ny terminal, dia hanampy be, ohatra, ny fametrahana fitaovana amin'ny rafitra izay hanampy antsika hanatsara ny fahombiazan'ny terminal, na mamafa ny rindranasan'ny rafitra amin'ireo ROM tany am-boalohany izay tsy manana toerana afa-tsy ao amin'ny terminal-nay ary tsy ampiasaintsika akory izany matetika.
1 Fitaovana mifanentana
2 Ahoana ny fomba hanonganana ny terminal anao amin'ny fampiasana SuperOneClick
Ny lisitry ny fitaovana mifanentana ho miorim-paka ny alalan ' SuperoneClickTena midadasika izy io ary tsy mijanona ny fitomboany, ny fomba tsara indrindra hahalalana raha mifanaraka ny fitaovanao dia ny fitsapana azy mivantana, satria ny programa, raha tsy mitombina amin'ny terminal anao io dia hitatitra lesoka mandritra ny fizotrany, fa tsy hisy fahasimbana ny terminal anao.
Ahoana ny fomba hanonganana ny terminal anao amin'ny fampiasana SuperOneClick
Ity programa ity dia manan-kery ho an'ny kinova rehetra an'ny Windows, mila apetrakao tsara fotsiny ny Microsoft .NET Framework 2.0, satria tena ilaina amin'ny fampandehanana marina ny programa.
Raha vantany vao alaina ny rakitra voafintina dia esorinay amin'ny alàlan'ny solo-saintsika azy io na aiza na aiza desk ny antsika Windows, hiditra ny fampirimana isika ary hanatanteraka ny fisie SuperOneClick.exe.
Tsy mila mampifandray ilay fitaovana tadiavintsika fotsiny isika izao Root, fa tsy maintsy jerentsika aloha fa manana ny Famafana USB navadika avy amin'ny fikirana, fampiharana, menio fampandrosoana.
Raha vao mifandray ilay fitaovana dia hojerentsika ao anaty boaty antsoina hoe mitrandraka voafantina ny safidy "Universal".
Ankehitriny dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra antsoina hoe Root avy eo an-tampon'ny fandaharana, ary miandry SuperOneClick vitao ny asanao.
Raha ny dingana vita, raha vao vita, dia tsy mitatitra karazana lesoka, dia hidika izany fa nifanaraka ny fitaovana sy ny tsy maintsy hongotantsika, hijerena izany dia mila manokatra fotsiny ny drawer ary hojerentsika ny fomba ananantsika fampiharana vaovao antsoina Mpampiasa super.
Raha tadiavinay Un-faka ny terminal anay, ampifandraisinay ilay fitaovana voalaza ary mila tsindrio fotsiny ilay safidy UnRoot.
Fanazavana fanampiny - DX Battery Booster, mahazoa ny baterinao
Ampidino - SuperOneClick
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » android-root » Ahoana ny fomba hanonganana ny terminal Android anao amin'ny SuperOneClick
188 hevitra, avelao ny anao
ny faka dia maharitra, sa tsy izany?
Haber, raha ny filazan'ireo mpamorona ny programa dia azonao atao ny miverina mampiasa ny safidy UnRoot, fa izaho manokana tsy nanandrana azy.
kornamf dia hoy izy:
mijanona amin'ny dingana faha-7 ny lalao xperia-ko
Valiny amin'i Kornamf
Azonao atao ve ny milaza amiko ny tokony hatao dia xperia play r800at kinova 2.3.3
manampy ny ray aman-dreny dia hoy izy:
Ny SuperOneClick dia tsy azo sintonina raha tsy mitondra viriosy ... ary ny rohy amin'ity pejy ity dia manome lesoka.
Mamaly fanampiana ny ray aman-dreny
raha faka ianao, azonao atao ve ny mampiasa ity programa ity hanonganana ny terminal? Sa mety tsy hahomby?
Andramo izany satria tsy hiteraka karazana fahasimbana eo amin'ny terminal, hanome anao karazana hadisoana fotsiny izany raha tsy mandeha izy.
TANDREMO, MISY VIRUS / malware ao amin'ny zip napetrakao! Nitsambikina ny nod32
Tsy manana karazana virus izy io, ara-dalàna raha hitsambikina ny nod32, fa afaka mihazakazaka am-piadananan-tsaina tanteraka ianao.
Notsapaiko manokana izany.
Chuchi dia hoy izy:
tsy milaza na inona na inona momba ny virus aho. Ami inona no mitranga amiko fa rehefa manomboka manao root kely aho dia tsy mamaly sy mikatona ilay programa.
Manana arc xperia aho eny tsy fantatro raha tsy hifanaraka amin'ity programa ity
Valiny tamin'i Chuchi
Mety tsy tohanana izy io, fa andramo alefa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana an'ny programa ny programa.
H2ontsho dia hoy izy:
Fa maninona no toa tsy mamaly ilay programa? manana pro motorola aho
Mamaly an'i H2ontsho
mitantana ny programa ho mpitantana.
fyko dia hoy izy:
salama manana samsung galaxy s2 aho, nampidina ny programa aho fa amin'ny fitrandrahana dia tsy miseho ny safidy universal, auto fotsiny, tsy misy zavatra hafa, nanandrana namaka tamin'ny auto aho fa tonga amin'ny teboka iray izay eo am-baravarankavia ankavia io milaza ny fomba hikarohanay tel fa any izy no mijanona ary eo ankavanana dia milaza fa tapitra…. ary tsy misy zavatra hafa manao ahy. azo amboarina ???? Misaotra anao
Valiny tamin'i Fyko
Hadinoko ny nilaza fa manana windows 7 aho raha misy ifandraisany amin'izany…
Alefaso ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fandefasana azy io ary kitiho ny bokotra havanana, safidio ny mihazakazaka ho Administrator
Bobbi dia hoy izy:
Tsy azoko ilay safidy fitrandrahana amin'ny "Universal", nosokafako ho admin ny programa, inona no tsy nety?
Valiny tamin'i Bobbi
Calarcha dia hoy izy:
Nosintomiko ny SuperOneClick fa Eset Nod 32 dia nanakana azy noho ny "fandrahonana maro"
Valiny tamin'i Calarcha
Omeo alalana izy mba tsy hisy zavatra hitranga, ara-dalàna raha i Esen no mandray azy ho toy ny fandrahonana
Tsy miseho ny safidy Universal, 🙁
Marco R. dia hoy izy:
Fanontaniana .. rehefa manao root ny app dia voafafa?
Valiny tamin'i Marco R.
evanjelincool dia hoy izy:
tsy miseho ny maody universal amin'ny exploid ... misintona sa zavatra hafa?
Mamaly an'i Evangelioncool
Ny safidy manerantany dia tsy miseho na dia mihazakazaka ny programa ho mpitantana aza, ny safidin'ny fiara irery ao amin'ny varavarankely exploid, azo atao amin'ny fomba mitovy odq ve mahavaha azy? Misaotra anao ary antenaiko fa ny valin-teninao
Kiro dia hoy izy:
Eny, tsy manao na inona na inona izy, manomboka izany fa eo izy mijanona. Tokony hanandrana ireo zavatra ireo izy ireo alohan'ny hametrahana azy satria nahita ny zavatra hitany sy ny fanehoan-kevitra toa tsy nisy nahatratra an'io, sa tsy izany?
Mamaly an'i kiro
Hawkfireman dia hoy izy:
Salama, avy any Arzantina aho, manana ny Defy + 4 andro lasa izay. Miaraka amin'ity programa mahatalanjona ity dia Mpampiasa Root aho. Mety io !!!
Valiny amin'i Halconfireman
Faly manampy anao
Misaotra betsaka!!!!! Izy io dia miasa tanteraka, na ny boky fampianarana tsy miorim-paka na ny boky manokatra.
aron31 dia hoy izy:
tsy mamela ahy hanao na inona na inona ny galaksi onlock manontany ahy programa hafa izay ataoko xq tsy azoko apetraka koa ny installer an'ny boxe busy
Mamaly an'i Aron31
Inona no modely faran'izay anananao?
Eto dia hoy izy:
Salama, manana finday «spice key motorola» aho ary tiako hongotana izany ary miaraka amin'ireo programa rehetra izay efa nanandramako teo am-pamoahana azy dia miseho amin'ny findaiko io: »efa tapaka ny karatra sd, tsy afaka manao an'io hetsika mandra-pahatongan'ny vuekva hampavitrika ny karatra sd ...
miandrasa valiny azafady
Mamaly an'i agui
Niasa tsara tamiko ny zava-drehetra !! misaotra 🙂
Ramone manankarena dia hoy izy:
finday inona no anananao? Manana ny neo aho, manao izany aho amin'izao fotoana izao ary amin'ny dingana manohizako dia voasakana ny programa 🙁
Valiny tamin'i Rich Ramone
Niezaka nanongotra ny findaiko (arc experia) sy ny sipako aho (samsung galaxy S2), nitantana azy ho admin ary tsy nisy na inona na inona namela ahy hiandry divice amin'ny dingana # 7.
Efa nanetsika ny deboka USB ve ianao?
Ny kinova 4.0.4 sy 4.0.3 tsirairay avy ary efa nodinihiko ny fomba fanafoanana
Heveriko fa hadisoan'ilay kinova io.
Heveriko fa tsy mahazaka Ice Cream izany
qstioner dia hoy izy:
Inona ny safidy apetraka: auto, psneuter na zerg Rush ... satria tsy misy ny safidy universal !!!!
ps: azonao valiana ny sasany amin'ireo fanontaniana mitovy etsy ambony ...
Valio amin'i qstioner
Fanjifana77 dia hoy izy:
Salama, tsy dia haiko loatra ny fandehan'ny forum, fa hitako fa mamaly amin'ireo mpampiasa hafa ianao, izay heveriko fa mahatakatra betsaka anao. Ho hitanao fa manana olana aho, rehefa mamaka na tsy miorim-paka, rehefa maka minitra vitsy dia milaza fa tsy mamaly intsony ary tsy manao n'inona n'inona intsony, tsy maintsy esoriko, ny tena izy dia efa namoaka Samsung hafa toa azy aho ary nivoaka tamin'ny voalohany nefa tsy nisy olana, inona no azoko atao? Misaotra ianao mialoha be.
Mamaly an'i Consu77
Modely inona no anananao?
Tamin'ny 30 septambra 2012 12:30 maraina, Disqus nanoratra hoe:
samsung galaxy mini, ny zava-misy dia volana vitsivitsy lasa izay dia nahavita namoaka finday mitovy amin'izany aho nefa tsy nisy olana tamin'ny fanarahana ireo dingana ireo, ka nanao vivery ny aina aho ny hanao izany. azafady mba ampio aho, ny finday dia ho an'ny zanako lahy izay faly manana izany Misaotra betsaka mialoha, triatra.
ranomasina matia dia hoy izy:
raha miseho manerantany dia mandehana vatosoa
Mamaly an'i matias mar
Vortex206 dia hoy izy:
Manana Galaxy s scl aho, izany hoe, gt-i9003, miaraka amin'ny gingerbread, firmware versi 2.3.6, windows 7 64bits ary tafahitsoka amin'ny dingana 6 aho: / inona no ataoko?
Valiny amin'ny Vortex206
Hamarino aloha fa manana fidirana USB debugging ianao, avelao ny SuperOneclick faharoa amin'ny maody mpitantana.
Raha tsy mety aminao izany dia satria tsy mifanaraka amin'ny findainao ny kinova Android entinao.
Homeofsith dia hoy izy:
Salama!! Manana Galaxy-S + (GTI 9001) aho, niorim-paka tamin'ity programa ity ny terminal ary nizotra tsara ny zava-drehetra, saingy taorian'ny fizotrany dia miadana kokoa noho ny teo aloha ny telefaona, indrindra ny momba ny bokotra "menio" sy "miverina "... Tsindriako izy ireo ary maka eo anelanelan'ny 1 sy 2 segondra izy ireo haneho hevitra ... ary mba hamindra ireo sary masina, tsy maintsy avelako eo amin'ny efijery mandritra ny 3 na 4 segondra ny rantsan-tànako hahafahako mamindra azy ireo ... inona mety ho ny olana? Azo vahana ve amin'ny alàlan'ny fametrahana rom na zavatra hafa? Misaotra mialoha!!
Valiny ho an'i Homeofsith
Nametraka ny fanarenana novaina koa ve ianao?
Tsia, fa efa namaha azy aho, misaotra ny valiny… nanao UnRoot aho ary nanandrana indray, tsara daholo, misaotra!
chilies_619 dia hoy izy:
Ahoana no nataonao UnRoot ... tsy mety amiko izany ...
Mamaly an'i Chiles_619
Ao amin'ny sary etsy ambony dia misy andalana maro ary roa ihany no azoko ary miaraka amina hafatra vitsivitsy miaraka amin'i * k dia heveriko fa tsy hahomby izy ireo, sa tsy izany? ary avy eo tsy mamaly ilay programa
ak47pro1999 dia hoy izy:
Rehefa azoko dia vonona izy.
Amin'ny fitaovako dia TSY azoko ilay rindranasa superuser.
Valiny amin'ny ak47pro1999
Terminal inona no anananao? Milaza ve ny tabilao SuperOneClick fa misy lesoka?
Salama. Hey, manana fanontaniana aho. Manana ny Xperia Neo aho ary amin'ny dingana 5 dia mijanona tsy mamaly ny programa. inona no antony?
Tsy ny terminal rehetra no mifanaraka, ary ao anatiny raha misy izy ireo dia miankina amin'ny firmware na ny kinovan'ny Android anananao.
Cazorla74 dia hoy izy:
Izaho dia namaka ny Samsung i9003 tamin'ny voalohany, tsy nisy olana. Ankehitriny mba hanadihady hanovana rom lol. Misaotra betsaka.
Mamaly an'i Cazorla74
Roy O'Bannon dia hoy izy:
Valiny tamin'i Roy O'Bannon
Hatreto aho dia eo amin'ny ankavia ihany no mamono mpizara adb ary etsy ambany manomboka ny mpizara adb
amin'ny lafiny ankavanana daemon tsy mandeha. manomboka azy izao amin'ny seranan-tsambo 5037 sy midina daemon nanomboka soa aman-tsara
ary eo io mihitsoka io
nahoana no hisy izany?
Magellan A dia hoy izy:
milamina ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ny fotoana hidirako ao amin'ny SuperUser ary tsy mahazo na inona na inona ao amin'ny lisitry ny rindranasa aho
Valiny ho an'i Magellan A
Feno ny lisitra rehefa manome alalana ny fampiharana ianao
Pablolp85 dia hoy izy:
Mila misintona rindranasa izay mila mampiasa ny superuser ianao .. eny an-tsena mametraka faka ary jereo, tandremo izay ovanao .. Nanova zavatra maro aho ary voahidy ny sela. Tsy maintsy nametraka endrika .. fa nametraka android 2.3 aho izao ,. Nanana ilay 2.1 aho. mandehana milay. fa tsy mikasika an'io intsony aho. x fisalasalana .. ary vitako daholo izany tamin'ny fisintomana ny Internet .. te-handoa vola 250 peso aho x manaparitaka azy. tsy mifikitra akory.
Valiny amin'i Pablolp85
Mario Barrera placeholder sary dia hoy izy:
Izaho dia manana Galaxy S3 izay tiako hongotana ny dingana tsy miova, tsy nanandrana mihitsy aho ary matahotra ny hanimba ny sela satria avy any am-pivarotana no mitondra azy ary mbola ao anaty fonosana aho, saingy matahotra aho mety tsy hahomby izy io
Valiny tamin'i Mario Barrera
Ataoko fa ampy ny mitady ilay superuser eny an-tsena .. ampiasao tsara ireo fampiharana izay mila alalana faka.
6/8/12 - Manana xperia x10a- Avy any Arzantina aho. ary niasa ilay programa. izay voalaza hoe> auto, psneuter na zerg rush .. andramo daholo izy telo. tsy nandeha ny fiara. Nanandrana psneuter koa aho .. tao amin'ny dingana 5 izy, nanandrana ny zerg Rush ary tonga lafatra .. tadidio ny famerenana indray ny cel isaky ny .. ary mametraka programa izay mitaky faka, hampiasa azy ireo mangina izy ireo, ary hamafa ireo zavatra tsy ilaina amin'ny ny sela, toa ny klavie sinoa tsy ampiasaiko .. antenaiko fa mety aminao izany. miasa tanteraka ny sela.
ny Facebook-ko dia: pablolp85@hotmail.com
Niasa taminao ve i Pablo?
Ie. niasa tsara. fa avy eo nametraka zavatra maro aho ary nanomboka nanova. ny mitovy amin'ny tsena dia ny programa mivantana hampidinana ny superuser. nefa tsy nanao n'inona n'inona .. mitovy ihany ny fandehanany .. nametraka ilay boatin'ahitra faka aho .. nanova ny endrik'ilay rafitra aho ary nandeha tsara taorian'ny famerenany .. fa avy eo te-hanova ireo lohahevitra ao ambadiky ny rafitra sy ny fanombohana ary ny famerenana indray tsy nanampy intsony .. nijanona teo amin'ny efijery sony ericsson .. izany no antony tsy maintsy nampidirako azy sy namerenako ilay android 2.1 .. mamolavola ny sela iray manontolo izy io. Mampalahelo. fa mandeha indray io .. avy eo nametraka ny zava-drehetra indray aho ary nanodinkodina ny manodidina ary ny zavatra mitovy dia nitranga indray .. fa izao nametraka android 2.3 aho .. tsara ho ahy io. TSY MANAIKITRA IZAO AMIN'NY FOTOTRA IZAO. Fafao fotsiny izay tsy ampiasainao, ohatra, ny fitendry sinoa dia mitaky habaka betsaka ary mieritreritra aho fa tsy mila izany ianao. Azonao atao ihany koa ny mamindra ny rindranasa avy amin'ny fahatsiarovan'ny sela mankany amin'ny karatra sd .. tsy maninona izany .. fa raha miahiahy ianao dia aza manova ny interface graphique.
Salama manana Xperia X8 aho, ary ny programa rehefa mametraka auto, psneuter na zerg Rush dia tsy avy amin'ny daemon tsy mandeha. manomboka azy izao amin'ny seranan-tsambo 5037 sy midina daemon nanomboka soa aman-tsara
ary niseho tamiko ny SuperOneClick fa tsy namaly… .. Afaka manampy ahy ve ianao
jerevo ny ahy fa mitovy ihany ny zava-nitranga .. kasiho ilay milaza fa faka faka .. kitiho fa tsy misy zavatra mitranga amin'ny sela .. ovao amin'ny psneuter ho zerg raha tsy mandeha ianao
Rehefa manandrana manokatra aho dia milaza amiko fa tsy mifanaraka amin'ny rafitra 64 bit izy io. Mampiasa Windows 7 Professional aho ary 3GB ny RAM-ko. Niezaka ny misintona Patch 4 GB aho saingy manome ahy ny lesoka iray ihany, heveriko fa ho 3 GB ny RAM-ko. Fa avy eo ahoana ny fomba fanamboarako azy?
QWERTY dia hoy izy:
jereo maria, miasa ao anaty 64 bit ny processeur-nao, ary heveriko fa 32 ny programa ka tsy ho zavatra na inona na inona avy amin'ilay ram-nao fa tsara ny pc anao, andramo fotsiny ny misintona kinova an'ity programa ity izay mifanaraka amin'ny 64 bit, izaho tsy fantatra raha misy ny arahaba
Mamaly an'i Qwerty
Gustavo Sotomayor dia hoy izy:
Misaotra betsaka!! Niorina tamin'ny fakany Galaxy aho. Tena tsara ity programa ity !!
Valiny tamin'i Gustavo Sotomayor
Misaotra anao namako nitsidika ny Blog
tsy manan-kialofana dia hoy izy:
Nety tsara izany !! Misaotra !!
Mamaly an'i Sdf
Sholy_05 dia hoy izy:
Nampidiniko ny lohako 32 Hitako fa fandrahonana maro izy ary napetrany tao anaty quarantine, manana motorola defy aho ary nandritra ny 2 herinandro dia nanomboka nihinana tahaka ny adala aho, saingy tsy afaka nanodina azy 🙁
Mamaly an'i Sholy_05
galaxy 3 dia hoy izy:
maninona no tsy mandeha intsony ny wifi-ko?
Valio ny galaxy 3
José? dia hoy izy:
ny lisitry ny apps tsy misy pk mbola tsy mametraka na inona na inona amin'ny filàna faka !! fa ahoana ny fomba hamafana ny rindranasa default toy ny lalao sns !!! Tsy azoko !!
Mamaly an'i Jose?
Agustin Romero Lopez dia hoy izy:
Miezaka ny hanao ny efitrano miaraka amin'ny Samsung galaxy S aho, rehefa manomboka ny programa dia toa fampitandremana 3 amin'ny teny anglisy aho, hoy aho hoe, manaraka ny torolalana aho, fa rehefa mamaka, na tratra ilay programa, na manomboka izy ireo miseho amin'ny efijery roa amin'ny programa ny zavatra, saingy tsy mifarana izany. Azafady mba avelao hisy hanampy ahy, mila miorim-paka hamaha ny telefaona aho
Valiny tamin'i Augustin Romero Lopez
fetamayo dia hoy izy:
Salama. Ao amin'ny
Mamaly an'i fetamayo
Salama. Tonga amin'ny dingana faha-7 izy ary nianjera. Manana S2 SGH aho - I777 Skyrocket AT&T miaraka amin'ny kinova 2.3.6. avy amin'ny android. Notsapaina imbetsaka fa tsy mandeha. Ny tiako atao dia ny mizara Wi-Fi fa ny safidy dia voasakana tsy ho eo amin'ny orinasa. Vonjeo.
Efa nitady fampiharana ao amin'ny Play Store ve ianao hizarana ny Wifi?
Shakadaresluis dia hoy izy:
Salama aho manana LG P708g ny k dia nivoaka niaraka tamin'ny fakantsary 8 megapixels ho an'i Mexico. Nanandrana nanongotra azy tamin'ny fomba maro aho ary tsy nisy zavatra tena nangetaheta aho nanandrana tamin'ity safidy ity ary tamin'ny dingana 5 izay hita eo am-baravarankely eo amin'ny sisiko ankavanako fanondranana TEMPRANDOM = 36271; fanondranana PS1 = FARANY: $ TEMPRANDOM; ./ zergRush
/ system / bin / sh: ./zergRush: tsy hita
FAMARANANA: 36271export PS1 = »»
Ampianaro olona hiteny amiko ny fomba famongorana ity terminal ity
Valiny amin'i Shakadaresluis
Manana Galaxy S2 aho, rehefa esoriko amin'ity programa ity dia tsy misy atahorana?
Mamaly an'i Asd
Salama aho nanandrana ny maody rehetra ary manana ary tsy mamaka ny sela, manana xperia x10 mini pro u20a miaraka amin'ny android 2.1 -u pdate 1 compilation 2.1.1.A.0.6 aho. amin'ny fotoana fikitihana ny root amin'ny tsipika voalohany misy hafatra avy amin'ny * mpizara tsy mandeha * dia hita eo amin'ny tsipika farany * daemon tsy mandeha. Sarking izany amin'ny port 5… Toa tsy mahita rakitra vitsivitsy ao amin'ny system / xbin sy ny system / bin… Tena tsy fantatro izay mitranga. Azafady raha afaka manampy ahy ianao.
Efa nanandrana ny Unloock Root ve ianao?
Ao amin'ny bilaogy dia misy lahatsoratra momba azy io ary mifanaraka amin'ny terminal maro
Tamin'ny 17 septambra 2012 18:33 maraina, Disqus nanoratra hoe:
Relovi ny olako, nampidina ny SuperOneClick aho satria nanana iray hafa nefa toa simba na zavatra toa izany satria tsy mandeha ara-dalàna sy tsara izany, misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara
Salama Jorge, izaho koa manana olana mitovy amin'izany. Inona ny kinova amin'ilay programa nakarinao?
Rey dia hoy izy:
mahafinaritra ny marina dia alaina ny kinova 2.3.3.
Ferrer dia hoy izy:
Mahagaga fa manana sim Dual Zonda 900 aho, nampiasa ny maody "Auto" aho, nisy fampandrenesana roa nipoitra, satria tsy nanana azy ireo ny mpamily ary io programa io ihany no nanome ahy safidy hametraka modely iray, tamin'ny voalohany dia nomeny ahy ahiahy, Eny, tsy nanana sonia ny mpamily, fampitandremana roa kokoa fa tamin'ny farany dia niorim-paka izy io, tsy naharitra 2 minitra ary 100 aho
Valiny tamin'i Ferrer
Erick Avila dia hoy izy:
htc manome aingam-panahy 4g niasa 100% GRaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa misaotra tiako ianao
Valiny tamin'i Avila Erick
Kevin 9230 dia hoy izy:
Ry namako, azonao atao ve ny mamakafaka ny aingam-panahy col el superone click ny anao dia avy at & t satria tsy afaka namaka ny ahy aho
Valiny tamin'i Kevin 9230
Alex Bedoya dia hoy izy:
Salama lehilahy, misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara fa manana olana aho ary io dia efa nanandrana fomba be loatra hamongorana azy aho fa tsy misy na amin'ity safidy ity
ny lesoka azoko dia daemong tsy mihazakazaka ary manamarina faka faka tsy marina… diso sy miorim-paka akorandriaka dingana faha-4 tsy nahomby napetraka pro maska
misaotra betsaka anao raha afaka manome valiny amiko ianao dia mainty lg optimus ny findaiko
sw version lg-p970-v20v
manangana isa grj22
kernel kinova 2.6.35
android kinova 2.3.4
ny mailako raha misy alejobesol@hotmail.com
Mamaly an'i alexo bedoya
milaza amiko izy fa tsy mamaly ny mailaka ataoko ilay programa manus93@live.com.ar Raha afaka mandefa vahaolana amiko ianao dia tiako ahodina, manana ny Samsung Galaxy sy Pro 2.3 aho
Sui dia hoy izy:
Salama, vaovao aho amin'ity, ary nanandrana nanongotra ny sela (samsung galaxy young) tamin'ny Unloock Root ary miaraka amin'ity fampiharana manaraka ny dingana ity, saingy tsy misy na inona na inona mitranga fotsiny… toa nifarana nefa tsy nisy. Tsy haiko raha afaka mitari-dalana ahy ianao
Mamaly an'i sui
Ory 1972 dia hoy izy:
Ny lesoka lehibe indrindra dia ny fampandehanana ny antivirus, izay nahatonga ireo rakitra Exploit ho quarantine.
Valiny ho an'i Uri 1972
Napetrako ny mandeha ho azy ary tsy maintsy namono antivirus tamin'ny PC aho, farany afaka namoaka ny rindranasa fitsapana nomen'ny mpandraharaha ahy aho, ary izany fotsiny no nanelingelina
Salama, fantatrao, manana xperia x8 aho ary milamina ny zava-drehetra fa amin'ny fotoana hametrahana faka dia tsy mamaly izany, azonao atao ve ny manampy ahy misaotra
Alexanderxd dia hoy izy:
Azoko atao ve ny mamoha arc x Xperia s amin'ny tenako sa mila mandoa vola aho? Aiza ny torolàlana hanalana na hamoahana azy? Misaotra anao.
Valiny tamin'i Alejandroxd
Ceaf15 dia hoy izy:
Manana Galasy S i897 aho ary rehefa manomboka miorim-paka dia lasa tsy mandray andraikitra intsony ary tsy manao zavatra hafa intsony… .Mba afaka manampy ahy azafady ??
Valiny amin'ny Ceaf15
Jose Paz dia hoy izy:
HELLO REHETRA INDRINDRA NY FOMBA HAKORAANA NY EVOLUTION 980 HUAWEI CM2 XNUMX ?????
Valio i jose paz
Napetrako tao amin'ny maody debugging, sokafako ny superoneclick ary tsy misy hita ao amin'ny programa, tsy misy teny, lisitra. ka inona no ataoko izao
ahh, efa tsapako fa feno irery, hehehe. Zavatra iray, rehefa mamaka aho dia mahazo "Mpamily tsy hita!", Milaza fa misy mpamily sasany tsy napetraka, te-hahafantatra aho hoe inona izany ary raha tokony hapetrako mba hirosoana dia izay.
miraikitra amiko io amin'ny dingana 2, manana galaxy samsung fit aho
Gustavo Diaz Lome dia hoy izy:
SADY NY MARAINA FA JEREO NY BLOGO ANAO, MANAO XPERIA P aho ary rehefa manao ny dingana izay hipetraka amin'ny isa 7, ary tsy mandalo avy eo, dia milaza fa tsy mamaly, dia ara-dalàna, na tsy mifanentana ny ekipa ?, MANKASITRAKA.
Valiny tamin'i Gustavo Díaz Lome
Tadiavo ny hafatra root root ary andramo izany fomba izany
Hatsarana sy Fahendrena N_n dia hoy izy:
Tsy afaka mamaka aho. Efa nanandrana programa 3 hafa aho ary milaza amiko fa tsy azo apetraka ny busybox sy ny superuser satria milaza hoe "tsy misy rakitra toa izany". Inona no anton'izany ??? Manana spice motorola xt300 navotsotra aho
Valin'ny hatsarana sy fahendrena N_n
miala tsiny fa mailaka ny beauty.and.wisdom.n_n@hotmail.com ...
Sallovirama11 dia hoy izy:
Salama manana Samsung Galaxy Mini aho ary nanandrana ny Super One Click fotsiny aho ary na dia omeko alalana amin'ny mpandrindra aza izany ary ampihetsika ny debugging USB… rehefa miorim-paka aho, dia hita eo amin'ny ilany ankavia fotsiny izao: Mamono mpizara adb sy ambany Manomboka mpizara adb ary
amin'ny ilany ankavanana: Daemon tsy mandeha. manomboka azy izao eo amin'ny seranana 5037 sy ambany: nanomboka soa aman-tsara i Daemon
Valiny ho an'i Sallovirama11
francolealpalaces dia hoy izy:
zavatra mitovy amiko no mitranga
Valiny tamin'i Francolealpalacios
Jaime Santillan Chávez dia hoy izy:
mametraka ny samsung KIES
Valiny tamin'i Jaime Santillán Chávez
Andriamanitra Tsitoha dia hoy izy:
Tena tsara, nametraka ny kies efa afaka
Valio Andriamanitra_ Mahery
RH66 dia hoy izy:
NA dia miaraka amin'ireo KIES aza, dia milaza amiko fa tsy mifanentana ny lalako
Valiny amin'ny RH66
Fernando Araya dia hoy izy:
ao amin'ny win7 dia misy hatrany ny olan'ny mpitantana… 😉
Valiny tamin'i Fernando Araya
raha te hihazakazaka amin'ny ankapobeny dia mila esorinao ny anti-virus satria mamafa ny rakitra sasany ao amin'ny superoneclick ... 😉
Salama, ahoana raha toa ka tsy Samsun no Motorola Difay? Ananako ny mv525, misaotra anao
Salama manana Samsung Galaxy Mini aho ary nanandrana ny Super One Click fotsiny aho ary na dia omeko alalana amin'ny mpandrindra aza izany ary ampihetsika ny debugging USB ... rehefa miorim-paka aho dia tsy mahazo afa-tsy izao.
eo amin'ny ilany ankavia: Mamono mpizara adb ary ambany Manomboka mpizara adb ary
ary tsy mitohy intsony .... Miandrasa vonjy.
Shirley dia hoy izy:
Perfect XD Misaotra betsaka anao, tsy fantatrao hoe ohatrinona no ilaiko amin'ny famongorana ny takelaka
Mamaly an'i Shirly
karra dia hoy izy:
Salama Francisco, misaotra betsaka mialoha anao amin'ny lesona. Manana tabilao galaxy samsung 2 7.0 miaraka amin'ny android 4.0.3 miaraka amin'ny p3100buald5 compilation aho.Holazaiko aminao ny momba ny fanangonana satria rehefa mahita ny fakan'ny ulnlock faka aho dia tsy mahazo an'io maodely io amin'ny lisitra mifanaraka amin'izany, izany no tadiaviko. Ny fanontaniako dia ny an'ity programa ity rehefa misafidy fiara aho ary manome root dia mahazo varavarankely izay milaza amiko momba ny mpamily ary amin'ny farany «tianao ve ny hametrahako Android ADB Interface Driver ho an'ny fitaovana? Nomeko ny TSIA ary mihantona amin'ny dingana faha-7 ny programa, inona no ataoko amin'ny easyoneclick? Na dia tsy mivoaka aza ny maodely dia andramako ny root root? Misaotra betsaka
Mamaly an'i Karra
Davichovich dia hoy izy:
Inona ny malaza!!! Manana zonda ZMCK 900 aho, misy Android 2.3.5, miasa ve ity rindranasa ity hanodinana azy?
Valiny tamin'i Davichovicho
TSY MISY boaty izany
Tsy misy boaty milaza UNIVERSAL ao anatin'ny programa SUPERONECLICK,
raha misy dia miankina amin'ny windows ihany koa
Diego Nava dia hoy izy:
azoko fa tsy mamaly an'io ny kentoty amin'ity ?????
Mamaly an'i diego nava
franklin saavedra dia hoy izy:
tsy mandeha amin'ny lalao andrana ataoko amin'ny android 2.3.3 ity
Mamaly an'i franklin saavedra
raha malalaka dia manontany raha te hanome biby ianao !!!
Andiee shinoda dia hoy izy:
Eny maimaim-poana izany nefa milaza amiko fa viruuus!
Valiny tamin'i Andiee Shinoda
Atsaharo ny antivirus ary dia izay.
Tamin'ny 19/01/2013 21:06 PM, «Disqus» nanoratra:
NANDEHA aho, NY ICON SUPERUSER dia napetraka tao CELU
Sinoa XL dia hoy izy:
Manana ny LG optimus L7, android ice cream sandwish 4.0.3 rafitra miasa aho, mieritreritra ve ianao fa afaka miorim-paka amin'ity programa ity? Efa nanandrana iray hafa aho fa tsy tadidiko ilay anarana ary tsy azoko fotsiny .. Tiako ho hita raha toa ka voavaha ny olan'ny SIM hatramin'ny nanomezan'ny zandriko zandriny ny finday ary nanomboka tamin'io andro io lazainy amiko TSY MISY FAMPANDROSOANA na TSY MISY SERVICE raha toa ka mamantatra ny SIM sy ny contact rehetra izay notahiriziko tao aminy sns fa amin'ny fotoana fandefasana hafatra na fandefasana SMS izay tsy misy serivisy na tsy misy fambara dia mieritreritra aho fa tsy maintsy ho configurement kely izany satria ny internet 3G dia nisarika ahy tamim-pahagagana fa ilay zavatra hafahafa ary mitady na aiza na aiza ny vahaolana fa tsy misy .. raha sendra nisy olona mitovy aminy dia antenaiko hizara ny fomba hamahana izany olana izany ary raha tsy izany dia hiezaka hamongotra aho sao dia raikitra, arahaba
Valiny amin'i ChinoXL
panxiis dia hoy izy:
misy mahalala ve raha miasa amin'ny motorola xt389 ??????
Valiny amin'ny panxiis
Lao dia hoy izy:
manompo amin'ny fiara?
Mamaly an'i lao
Edward Avila dia hoy izy:
Niasa tsy nisy olana tamin'ny finday sinoa io: INCO A606. Misintona azy eto ny mpamily http://www.4shared.com/rar/0MvyztbR/usb_driver_MT65xx_Android_ZTE_.html?cau2=403tNull
Fandraisana anjara tena tsara soa. fiarahabana
Valiny tamin'i Eduardo Avila
Manuel Alejandro Jimenez Garcia dia hoy izy:
Manana finday iray ihany aho, saingy tsy nisy na inona na inona rehefa namaka azy aho, napetrak'ilay mpampiasa super fa tsy nanao na inona na inona ... Azonao atao ve ny mamaka azy tsara?
Valiny tamin'i Manuel Alejandro Jimenez Garci
Alexiitha Gamarra Montestruque dia hoy izy:
Salama, fantatrao ve raha miasa amin'ny Motorola Motosmart XT389 ???
Valiny tamin'i Alexiitha Gamarra Montestruque
Manana htc ny glacier 4g mikasika ahy aho ary tsy afaka nahazo kisoa sera
Mamaly an'i eddgar
topocello dia hoy izy:
Mijanona amin'ny dingana iray izy ary miteny hoe "Kiliing ADB ary miverina ho faka ... ankafizo!" ary tsy misy zavatra mitranga avy eo, niandry hatramin'ny antsasak'adiny aho ary tsy nisy, novako ny seranana ary tsy nisy, averiko indray ary tsy miseho ilay superuser, inona no azoko atao?
Mamaly an'i topocello
guateitor dia hoy izy:
Nataoko ny zava-drehetra fa tsy azoko ilay rindranasa superuser ary tsy manokatra ny boaty bevata izy io
Mamaly amin'ny guateitor
Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba famohana vodafone smart 7 takelaka misaotra
Martinez Contreras Bryan Jorge dia hoy izy:
Niasa tamin'ny motera taloha 389 izy ary inona ny loza mety hitranga raha mandeha izy ary ahoana no ampiharako azy
Valiny tamin'i Martinez Contreras Bryan Jorge
Mike parra dia hoy izy:
Salama aho manana i5510 samsung miaraka amin'ny gingerbread 2.3.6 mifarana ny zava-drehetra fa tsy misy na inona na inona avy amin'ny superuser miseho ... tsy misy fampiharana ...
Valiny tamin'i Mike Parra
Rehefa omeko ny Root amin'ny solosaina dia lazainy amiko fa tsy mamaly ilay programa, dia nianjera izy ary nikatona. Efa nanandrana azy imbetsaka aho ary zavatra mitovy amin'izany no mitranga amiko isaky ny mandeha. Manana windows 7 aho ary ny dikan'ny Framework dia 1.1, araka ny hevitrao izany no antony? Ahoana no fomba hametrahako ny kinova 2.0? Misaotra
Avy amin'ny fanavaozana Windows
Tamin'ny 13/01/2013 14:10 PM, «Disqus» nanoratra:
Tatto dia hoy izy:
Misaotra, nanampy betsaka ahy io
Mamaly an'i Tatito
Luchi flomen dia hoy izy:
Salama namana ao anaty boaty kely an'ny auto sy desckopt.ini dia hita, miorim-paka toa izao aho saingy misy lesoka ary manondro ny folder izay misy unzip ilay iray, fantatro fa tsindrio ny fomba anaovako azy? Azafady raha azonao atao ny mamaly ahy , nanampy olona tsy mahalala ianao: D !!
Valiny tamin'i Luchi Flomen
salkro dia hoy izy:
Maharitra hafiriana? Adiny iray aho ary tsy mandroso ity. Tsy misy afa-tsy ireo zavatra roa voalohany hita tao amin'ny fisamborana ahy
Mamaly an'i salkro
xuantxu dia hoy izy:
Manana Glaxy ACE S5830i aho izay mila miorim-paka sahady noho ny olan'ny habakabaka. Manandrana mampiasa ny SuperOneClick dia mahazo ianao:
Fitaovana miorim-paka Shell: Dingana 7…. Miandry ny fitaovana
Ary eo dia milaza fa tsy mamaly ary tsy mandroso lavitra
Ahoana no hamahako azy?
Mamaly an'i xuantxu
Andramo ny UnlockRoot: https://www.androidsis.com/unlockroot-herramienta-para-rootear-un-buen-numero-de-dispositivos/
pab dia hoy izy:
aza adino ny misafidy amin'ny fikirakirana, ny rindranasa, ny fivoarana, ny safidy debugging voamarina ary alao ny firewall an'ny antivirus. FAHASALAMANA
Mamaly an'i pab
moizez102 dia hoy izy:
Salama, somary mitandrina aho, ary tiako ho fantatra raha miasa amin'ny tabilao samsung galaxy 2 7.0 android: 4.0.3 Manantena aho fa hamaly izy ireo satria tsy haiko raha mandeha
Valiny amin'ny moizez102
tsy afaka amin'ny moto xt316-ko izany
Angel vasquez dia hoy izy:
Manana ny Samung Kies napetraka aho nefa mbola tsy milamina.
Mahazo FARANY aho fa tsy zavatra hafa
Tsy hamerina ny solosaina na zavatra hafa izany.
Afaka manampy ianao?
Valiny tamin'i Angel Vasquez
Manana Samsung Galaxy Ace ilay kinova nohatsaraina aho.
Mametraka ny Super One Click aho.
Ampiasaiko ny USB Debugging.
Mahazo Auto aho ary omeko azy io.
Manana ny Samsung Kies napetraka aho.
Entiko daholo ny zava-drehetra fa ao amin'ny Cheking Shell sy Checking Root dia diso aho.
Mahazo ny FARANY farany aho fa tsy manomboka indray na inona na inona.
Illa Morwen Númenesë dia hoy izy:
Tsy afaka misintona ny superoneclick aho
Mamaly an'i Illa Morwen Númenessë
Tsy fantatro izay nataoko fa tsy miseho ny klavier ary tsy afaka manoratra hafatra aho, misy olona afaka manohana ahy, misaotra anao fsanchez923@hotmail.com
Karazana terminal inona no anananao?
MIALAELO IZY IREO ANDROID A606, NY KEYBOARD TSY miseho eo amin'ny SCREEN, INONA no ataoko? VONJEO
Faran'ny terminal feno?
Mahereza Jesosy dia hoy izy:
Salama hey raha mifanaraka amin'ny cel inco A606 android version 4.0.4 efa nataoko io ary tsy manome alalana faka ho anao, afaka manampy ahy ve ianao
Valiny tamin'i Danaje Yaret Jesus
swiftlovers dia hoy izy:
Manana captivate Samsung galaxy aho, saingy manana olana amin'ny fampifandraisana azy amin'ny kies, satria etsy ambany no ilazanao fa raha sendra mikatona ilay tsindry super iray dia andao andramana miaraka amin'ireo kies, fa ireo rehetra nampidiriko dia nivoaka izay tsia dia mifanaraka amin'ny kinova fanamafisako, inona no ataoko ...?
Valio ny swiftlovers
Manana xperia x8 aho ary tsy mahazo mihazakazaka fotsiny i Daemon. manomboka azy eo amin'ny seranan-tsambo 5037 sy ambany izao: Nanomboka tamim-pahombiazana i Daemon, nametraka ilay tsindry iray tamin'ny AUTO! misy vahaolana ve?
Fabiruchis RaaygoZa dia hoy izy:
Salama aho manana lanix ilium s50 ahoana no hataoko fakana azy io ary apetrako amin'ny Internet maimaimpoana ary azon'izy ireo hazavaina amiko sy izay pejy alaina
Valiny tamin'i Faabiruchis RaaygoZa
Fantatrao ve aho fa toa supreuser dia mitovy amin'ny superuser?
Raha mitovy io dia efa anananao ilay namaka namaka
piratillanoob dia hoy izy:
Fa aiza no ahitanao ilay superuser? Izany ve aorian'ny fanindriana ny bokotra root, eny, 123342 ny kaody nivoaka nefa tafahitsoka teo aho, ary tsy manana na inona na inona amin'ny maha mpampiasa be ahy na izay tokony hataoko, ilay vatasarihana de Applications ?? Tsy haiko izay tiana hambara, azonao hazavaina amin'ny fomba hafa ve izany dingana izany?
Manana ny mini galaxy samsung aho, tokony hiasa ho ahy izy ity hehe. Misaotra anao!!
Mamaly an'i piratillanoob
waltz dia hoy izy:
azonao atao na dia ao amin'ny kinova sandwich gilasy aza ianao
Mamaly an'i wals
CR dia hoy izy:
Manana samsung galaxy ace pus s7500l aho, azo atao ve ny mampiasa an'io fitaovana io? Arahaba
Valiny amin'i Cristian CR
setepower dia hoy izy:
Salama! Rehefa manandrana mamaka ny galaxy scl gt i9300 miaraka amin'ny win.vista miaraka amin'ny superoneclick, manana ny kies, ny app superuser ary ny rafitra, tratra ny superoneclick ary mametraka ahy "tsy mamaly", avelako izy ary mitohy, fa a fotoana izay tsy manaraka ary mametraka ny faritra mety Error 8mil nosecuantos .. mamporisika zavatra ho ahy ve ianao? Misaotra anao!
miasa amin'ny motorola xt389 na tsia
jhanca dia hoy izy:
Mora ny mampiasa an'ity fampiharana ity, mila manana mpamily ilaina amin'ny findainao manokana ianao ... azonao atao ny mamaka ny ustarcom adr 2100 avy amin'ny mobilenet
Mamaly an'i jhanca
Roger diaz dia hoy izy:
Ry namako azoko fa tsy valiako ilay pejy, inona no ataoko? manana ny Huawei miakatra aho y200
Mila ahodiko io, misy mahalala programa hafa ve sa hanampy ahy?
Tena ankasitrahana izany;))
Valiny tamin'i Roger Diaz
Diego Lozano Páez dia hoy izy:
Salama namana, manana ny ZTE SKATE aho ary te ho tonga superuser, mety ve ity programa ity hanongorana ny findaiko? Zavatra iray hafa, inona no mety hitranga amin'izany? Azonao atao ve ny manampy ahy azafady, avy eo tsy maintsy apetrakao ny mpamily finday ary raha eny, ahoana no anaovana azy, misaotra .MIHAINO AZAFADY AZAFADY
Valiny tamin'i Diego Lozano Paez
misaotra mila miorim-paka aho haka sary amin'ny akondro misy zavatra marobe izay novakiako sy hitako tato amin'ity shiet ity fa manana kernel sin 4.0 an'ny sinoa 2.3 izay hongotako ity helpsaaaaaa finday ity izay ampiasako miezaha mba ho voaro ary tsy haiko fa nariany aho, misaotra
ahoana no hamongorana ny lg e400
Jose Luis Robles Carlos dia hoy izy:
hey inona no mitranga dia nosakanako ny findaiko noho ny fanandramana mamoha tsy nahomby!
ary tsy haiko ny mamoha azy 🙁… azonao atao ve ny milaza amiko hoe, azafady!
Ny findaiko dia:
Azafady, raha hainao ny manao azy, lazao aho
Valiny tamin'i Jose Luis Robles Carlos
Serge Suarez dia hoy izy:
Miala tsiny, manandrana mamaka azy io aho saingy mihamangatsiaka hatrany am-piandohan'ny zava-drehetra fa milaza amiko aloha fa tsy misy mpamily ny findaiko, izany ve? Alcatel One Touch T'POP 4010 io
Valiny tamin'i Sergio Suarez
Salama, rahampitso tolak'andro .... Efa manana ny findaiko Zonda ZMCK900 miorim-paka aho ... izao dia mila milaza amiko, azafady, inona ny rindranasa misy hanatsarana ny zava-bitany ... programa iray hanakalo ahy ... na izay manitatra ny fahatsiarovako virtoaly sy miasa na anatiny ... sy programa na rindranasa amin'ny ankapobeny fa apetraka amin'ny telefaona miorim-paka izy ireo ary aiza no ahafahako misintona azy ireo..Misaotra
Mtrejo dia hoy izy:
Salama, manana an'io ihany aho, ary ny zavatra tsy maintsy ataoko mba hahavitana azy tsara, dia ny Link2SD handefasana ny rindranasa amin'ny memoara SD, DiskUsage hijerena ny fahatsiarovan-tena ao anatiny, ireo rakitra izay mitombo be ary tsy mahatadidy intsony, Root Explorer hahafahako mamafa ireo rakitra izay nohafoheziko tamin'ny DiskUsage
Mamaly an'i Mtrejo
Carlos Andres Hernandez dia hoy izy:
afaka nampiasa CacheMate ihany koa izy ireo
afaho ny cache
Valiny tamin'i Carlos Andres Hernandez
Monopicho dia hoy izy:
Ry Francisco malala,
Tsy mandeha intsony ny rohy fampidinana SuperOneClick. DepositFile dia efa namafa azy.
Misaotra betsaka amin'ny fanampianao !!!
Mamaly an'i Mongopicho
Ami rehefa nahatratra ny dingana faha-7 izy dia nilaza fa TSY mamaly ny programa ary tsy manao na inona na inona ... ARY ANDRAMO NY FOMBA REHETRA IZAY MISY ARY TSY MAFY, TSY MISY IZAO Milaza HADISOANA NA Hetsika sasantsasany ,,, NY TLFO dia LG L7 RAHA misy olona afaka manampy ahy dia tena misaotra anao! NY MAILYO dia: roberto_haze@hotmail.com
Jess dia hoy izy:
Salama, mandeha amin'ny xperia mandeha ve izy io? Milaza amiko izany fa tsy misy mpamily ao amin'ny adb na st27? Ahoana ny fomba fampidinana azy ireo?
Mamaly an'i Jess
Salama, rehefa miorim-paka ny sony ericsson wt19a, ahoana no hahazoako ny kaody famoahana tambajotra hahafahako mampiasa azy amin'ny orinasa rehetra?
Inēs Acøsta Andradē dia hoy izy:
Salama, tiako ny hanafatrao ahy kely. Manana HTC Desire A8181 aho. Nanaraka ny dingana mankany amin'ny Root miaraka amin'ny SuperOneClick fotsiny aho ary tsy nety tamiko, izany hoe tsy hitako ny SuperUser App amin'ny findaiko.
Ireo no fampandrenesana nipoitra sy izay nataoko tamin'izany fotoana izany.
-Nandeha ny fanamarinana kinova mandeha ho azy. Ny OS-nao ve 2.0 na avo kokoa?
..Eny hoy aho
-Tsy azo vakiana ireo fananan'ny fitaovana! (Tokony hanandrana mamerina ny fitaovanao ianao)
.. Nomeko azy Skip
-Efa vita ny afisy, manontania raha mila fitsapana aho, hoy aho.
-Niverina indray ny telefaona sela.
..Tsy mahita App Mpampiasa Super aho.
..Inona no tsy nety nataoko?
Valio i Inēs Acøsta Andradē
ckhrizthian dia hoy izy:
Salama aho manana LG Optimus L9 P760 dia manomboka ny zava-drehetra apetrako ireo mpamily ampiako manana windows 7 total starter izay omeko an'ny ROOT ary rehefa mahatratra ny dingana # 7 dia mijanona ary azoko fa tsy mamaly ilay programa ary mijanona eo izy , satria mety ho ary Inona no azoko atao, azafady mba ampio.
Mamaly an'i ckhrizthian
Leon dia hoy izy:
farany tahaka ny nataonao hamongorana ny LG9 anao. Misaotra ary jereo raha mety amiko.
Mamaly an'i leon
Salama, efa nanaraka ny lesona aho rehefa mamaritra izany ary tsy mandeha amin'ny fahitalavitra Samsung Galaxy sy S5367, inona no soso-kevitrao? Misaotra anao
Imur dia hoy izy:
Te-haneho hevitra aho fa tsy maintsy nampiasa ny SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1.5.33.0.exe hanoratako azy, satria tsy nametraka ahy i Kies (nakatona aloha izy io) ary tsy nahita na inona na inona tamin'ny Wifi aho (misy apps fa tsy azoko atao izany. lalana)
Mamaly an'i Imur
MALOW dia hoy izy:
Rohy mankany ambany
Valiny amin'ny MALOW
Jose Ignacio. dia hoy izy:
Misaotra ny tuto.
Tsy miresaka na inona na inona momba ny mpamily ianao. Fantatro fa tsy maintsy apetrakao ny mpamily mba hongotan'ny finday alohan'ny hanombohana, fa tsy haiko raha miaraka amin'ny SuperOneClick dia tsy ilaina izany satria efa manana azy ireo.
Ity no fanontaniako.
PS: Manana Xperia st26i aho
Valiny tamin'i José Ignacio.
Ahoana ny famohana Samsung Galaxy S sy Samsung Galaxy SII amin'ny Galaxy S Unlock